မှိုနဲ့ ဘက်တီးရီးယားကူးစက်ရောဂါတွေကို သဘာဝနည်းလမ်းတွေနဲ့ ဘယ်လိုကုသမလဲ - Hello Sayarwon
မှိုနဲ့ ဘက်တီးရီးယားကူးစက်ရောဂါတွေဟာ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေရုံသာမက ဝက်ခြံပေါက်ခြင်း၊candida မှိုစွဲခြင်းနဲ့ လိင်အင်္ဂါကူးစက်ရောဂါတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာရင် ခရင်မ်၊လိုးရှင်း နဲ့ ဆေးပြားတွေကို သုံးစွဲမယ့်အစား အဆိုပါ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေကို အောက်ဖော်ပြပါ သဘာဝနည်းလမ်းတွေကို သုံးပြီး နှိမ်နင်းနိုင်ပါတယ်။
မကောင်းတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေရန်က ကင်းဝေးစေဖို့အတွက် carbohydrate ဓါတ်(ကစီဓါတ်)နဲ့ အချိုတွေကို လျှော့စားရပါမယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဆိုပါ အစားအစာတွေဟာ ဘက်တီးရီးယားတွေ ပိုမိုပေါက်ပွားအောင် အားပေးနိုင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နေ့စဉ်စားသောက်မှုပုံစံထဲကနေ အချိုဓါတ်ကို လုံးဝဖယ်ထုတ်ပစ်ဖို့ကျတော့ လူအများစုအတွက် ခက်ခဲပါတယ်။ အချိုဓါတ်(သကြား)ဟာ ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်စားသောက်နေတဲ့ အစားအစာတွေအားလုံးနီးနီးမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။
ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့ သကြားလုံးတွေ၊အချိုတွေ၊ဆိုဒါတွေ၊ချိုတဲ့ အစားအစာတွေ နဲ့ အစာအိမ်ထဲမှာ ချေဖျက်ပစ်လိုက်တဲ့အခါ သကြားဓါတ်အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့ အစားအစာတွေ(ဥပမာ အဖြူရောင် ပတ်စတာ ခေါက်ဆွဲ၊ပေါင်မုန့်ဖြူ နဲ့ အနှံတွေ အားလုံးနီးပါး)ကို တတ်နိုင်သမျှ လျှော့စားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်း (antioxidants)တွေကို တိုးမြှင့်စားသုံးပါ။
ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်း (antioxidants)တွေဟာ သဘာဝအလျောက် ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတွေဖြစ်ပြီး ချဉ်တဲ့အသီးတွေ၊လက်ဖက်စိမ်း၊ကော်ဖီနဲ့ ချောကလက်တွေမှာ တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်း (antioxidants)တွေဟာ ကင်ဆာရောဂါ၊အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်း အစရှိတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်အောင် ကူညီပေးတယ်လို့ ယုံကြည်ရပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး၊သူတို့ဟာ ခန္ဓါကိုယ်အတွင်းရှိ ကျန်းမာနေတဲ့ ဆဲလ်အကောင်းတွေ ဖျက်ဆီးခံရပြီး free radicals လို့ခေါ်တဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါသေးတယ်။
ဒါ့အပြင် ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်း (antioxidants)တွေဟာ မှိုနဲ့ (မကောင်းတဲ့)ဘက်တီးရီးယားတွေအားလုံးကို ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးနိုင်တာကြောင့် သင့်ခုခံအားစနစ်ကိုပါ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
oregano အဆီကို စမ်းသုံးကြည့်ပါ။
candida နဲ့yeast မှိုစွဲခြင်းတို့ကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်ကုသပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတခုကတော့ တနေ့ကို oregano အဆီ လေးစက်ခန့် စားပေးခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။oregano ဟာ မကောင်းတဲ့ ဘက်တီးရီးယားအတော်များများကို ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်။
Colloidal silver ဟာ ပိုးမွှားတွေကို ကုန်စင်အောင် ဖယ်ရှားကုသပေးမယ့် သဘာဝပိုးသတ်ဆေးတမျိုးဖြစ်ပြီး ခုခံအားစနစ်ကို ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် တခါသောက်ရင် လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတဇွန်းနှုန်းနဲ့ တနေ့သုံးကြိမ်သောက်ရင် လုံလောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ရှိသမျှ ဘက်တီးရီးယားတွေကို ဖယ်ရှားပစ်ခြင်းဟာ သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
အချို့သော အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားတွေဟာ မကောင်းတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကို တိုက်ထုတ်နိုင်ပေမယ့် ၎င်းတို့ဟာ သင့်ခန္ဓါကိုယ်ထဲမှာ အမြဲတစေ ရှိမနေပါဘူး။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ Probiotics တွေကို ဖြည့်စွက်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။
Probiotics အနည်းငယ် သုံးစွဲပြီးတဲ့အခါ မှိုရောဂါတွေအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိသလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်ပါ။ ဒါ့အပြင် Probiotics တွေဟာ အစာချေအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းနဲ့ ခုခံအားစနစ်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးတွေဟာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်(ဆေးစာ)ပါမှသာ ရောင်းချပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အလွယ်တကူ ဝယ်လို့တော့ မရနိုင်ပါဘူး။ သူတို့ဟာ ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ကူးစက်ရောဂါတွေကိုသာ ပျောက်အောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သင်ဟာ ပဋိဇီဝဆေးတွေကို အလွန်အကျွံအသုံးပြုမယ် ဒါမှမဟုတ် တလွဲသုံးမယ်ဆိုရင် ဆေးယဉ်ပါးတဲ့ ပြဿနာနဲ့ ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားတွေကိုပါ မတော်တဆ ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပစ်မိတတ်ပါသေးတယ်။
ဗီတာမင် D ဟာ အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဗီတာမင် D ဟာ ဆံပင်၊လက်သည်း၊ခြေသည်းတွေနဲ့ အရေပြားတို့ကို ကျန်းမာသန်စွမ်းစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင့်အစာချေလမ်းကြောင်းထဲမှာ အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားတွေ ပိုမိုများပြားလာအောင်လည်း ပြုလုပ်ပေးပါသေးတယ်။
နေပူထဲမှာ နေ့စဉ်တနာရီလောက် နေပေးခြင်း၊ဗီတာမင် D ပါတဲ့ အစားအစာတွေကို ပိုမိုစားပေးခြင်း ဒါမှမဟုတ် ဗီတာမင် D ဖြည့်စွက်အားဆေးများ စားသုံးခြင်းအားဖြင့် ဗီတာမင် D ပိုမိုရရှိအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
7 Natural Ways To Get Rid Of Yeast And Bad Bacteria!. https://ohsimply.com/7-natural- ways-get- rid-of-
yeast-and- bad-bacteria/. Accessed February 04, 2017